Ixhaphozi Namachibikazi eSimangaliso
Lokho esikjwayele ukukwazi ngokuthi iSt Greater St Lucia Wetland Park yaKwaZulu-Natali sekubizwa ngokusemthethweni iSimangaliso, 'indawo yokumangaza', okuyikho okubizwa ngegama lendawo - futhi igama elifanele kakhulu. Ipaki inezinhlobonhlobo ezihlukahlukene kakhulu eziphilayo, eziqukethe amanzi olwandle, amaxhaphozi, ihlathi, amasimini kanye nasezindaweni zasendle, ezihlangene nazo zonke izilwane eziphilayo ezihamba nazo - ezibandakanya oshaka nezingwenya kuya kukhozi nobhejane. Futhi iSimangaliso ingxenye yeLake St Lucia, umzimba omkhulu kunawo wonke wamanzi angaphakathi eNingizimu Afrika, kanye nonqenqema lwamatshe ngaphansi kolwandle engaseningizimu ye Afrika.
Indlela entsha yokuqamba kabusha evelele izwe lethu ingaba yinto edidayo ngezikhathi ezithile, ngamagama angaphambi kwasekoloni ngokuvamile eya phambili kunalawo asekoloni bese kukhona indaba yamanye amagama ashintsha njalo uma imephu entsha iphuma (Umfolozi / uMfolozi / Mfolozi / Mfolosi /Imfolosi njengesibonelo esisodwa). Ngakho-ke kungenzeka ukuthi igama elisha, 'elungile' lechibi enikhulu lemvelo eNingizimu Afrika nguSibayi, kunokuba iSibaya.
Kungakhathaliseki ukuthi yikuphi, leli chibi laseZululand ligcwele izinhlanzi namavubu nezingwenya. Uma ilanga lishona kanye nezinyoni zindiza phezu kwamanzi ukuze zihlale emaphethelweni emithi yezihlahla zehlathi, futhi izivubu ziqala ukuqhuma futhi 'zikhanye' komunye nomunye, ikunikeza umfanekiso wasendulo wasePleistocene, ngaphambi kokuba sithengise amatshe ethu ukuze sithole amakhompyutha nama-4x4. Kubonakala kahle kusukela kusihlenga, emva kwalokho uphumela ogwini kanti abantu bendawo bahlala bebeka itafula enenkantini.
Kungenjalo, eyaziwa ngokuthi i-Kosi Lake, iLake Ku-Hlange empeleni ingxenye lwezilwandle ezixhunyaniswe eyaziwa ngokudoba izinhlanzi okwenziwa amaTsonga. Izakhiwo ziyenziwe ngokuhlakanipha, zihola izinhlanzi phakathi “kwezibaya” zamanzi okuyizithiyo. Izithiyo zihambelana nemvelo, hhayi nje kuphela ukuthi zivumela izinhlanzi ezincane nezinye izilwane zasemanzini ukuba zibalekele, kodwa zenziwe ngokhuni lwendawo futhi zihlanganiswe namaqabunga ahlambulukile emithi ekhula eduze.
Izithiyo zidluliselwa kubaba kuya endodaneni, njengoba kwenziwe iminyaka engamakhulu ayisikhombisa ukuthi laba bantu be-Nguni baphile kulo mlando wezomnotho. Ichibi yilona elingasenyakatho yeSimangaliso Wetland Park futhi umlomo uhlala eceleni kwamakhilomitha amathathu eningizimu yomngcele waseMozambique.